CUNTO-KARISKU MA QAADI KARO: WAXYEELO, CALAAMADAHA SUMOWGA IYO DAAWEYNTA - XOOLAHA
Kaarbooyinka la siin karaa celandine
Waqtiga qandhada, su'aasha nooca cawska ah ayaa la siin karaa bakaylaha oo la qalajiyo si loo sii marsiiyo cunnooyinka cawska waxay noqotaa mid deg deg ah. Celandine wuxuu ku koraa waxyaabo farabadan oo banaan oo u dhow hareeraha beeraha ee gaarka loo leeyahay waxaana uu ku faraxsan yahay isha caleemo jilicsan ee bisha Abriil iyada oo qadar yar oo geedo kale ah, sidaas darteed su'aasha ayaa soo baxaysa haddii la siin karo xayawaanka.
Ma suurtagal tahay in bakaylaha celandine
Celandine waa geedo daaqsin ah oo ka tirsan qoyska poppy. Waxay leedahay caleemo badan oo caleenta ah iyo ubaxyo huruud ah oo ku yaala lugaha dheer. Midhaha ayaa ah geed canab ah. Mid ka mid ah sifooyinka muuqda ee celindine waa juice orange liin dhalaalaya, kaas oo ka muuqda barta meesha ay astaamuhu jebiyaan.
Ma taqaanaa? Dhamaan qarniyadii dhexe, celandine waxaa loo isticmaalay mid ka mid ah kiciyeyaasha loogu talagalay jawaab celinta alchemical si loogu beddelo biraha aan qiimaha lahayn dahab.
Magaca ugu caansan ee warshadda wuxuu u ahaa karti u ah inuu jidhka nadiifiyo, i.e. daweeyo cudurrada maqaarka ee kala duwan. Daaweynta, casiir ayaa loo isticmaalaa in uu leeyahay guryaha isku midka ah ee lidka ku ah sida iodine.
Soodhaha warshad ee ujeeddooyinka daaweynta maaha xitaa ku haboon dadka oo dhan, sababtoo ah sunta sareysa, sidaas darteed, waa mid aan lagugula talin in la siiyo xayawaanka midkood oo qoyan ama la qalajiyey. In geeddi-socodka qalajinta, dhir kasta oo lumiya qoyaan, laakiin ma firfircoon firfircoon, sidaas daroogada ee cawska cusub oo qallalan ee bakaylaha waa isku mid.
Ma taqaanaa? Magaca Giriigga ee celandine - Cawska oo liqay - ka soo jeeda qulqulka wakhtiga ubax ee soo gelitaanka liqidda.
Calaamadaha Caleenta Sunta
Xidhiidh la leh celandine oo jirka ku jira ayaa keena sarkhaan, oo lagu muujiyey foomka:
gubashada xuubka xiidmaha xiidmaha.
Sida loo caawiyo bakayle
Si aad u caawiso xayawaanka haddii ay dhacdo in shilalka shilalka leh sunta khudradda, waa lagama maarmaan:
si loogu soo bandhigo sunta sunta ee cabitaanka si loo siiyo xal daciif ah oo ah manganese potassium;
si aad u nadiifiso mindhicirka, waxaad siin kartaa caloosha jilibka - qiyaasta qiyaasta 0.02 g / kg oo miisaanka nool. Sidoo kale waa in lagu nadiifiyo suuliga;
soo bandhigid antihistamine si looga hortago shoog xasaasiyadeed - Dexfort-ka intramuscularly, miisaanka jirka 0.15 mg / kg;
si ay u taageeraan shaqada wadnaha - "Sulfocamphocain", 250 mg / kg miisaanka jidhka 1 mar ah gudahiisa ama subcutaneously.
Waa muhiim! Heerka suntu waxay ku xiran tahay xaddiga sunta ee dhiigga. Qadar ballaaran oo casiir ah celandine wuxuu keeni karaa miyir beelid, xitaa kooma.
Ka hortagga sumowga by sunta asalka dhirta waa xakamaynta cuntada ku dhacda feederiyeyaasha bakayle. Dabcan, dadka qaangaarka ahi waxay aqoonsan karaan dhirta jidhka ku sumooba, laakiin tani macnaheedu maaha in cuntada la rabo in loo qaado si aan masuuliyad lahayn.
Maxaa ka fiican inaad bixiso bakaylaha cawska
First of dhan, dhirta daawooyinka aan-sunta ah, iyo sidoo kale cows canug yaryar yihiin faa'iido leh ee bakaylaha:
Marka laga reebo geedo iyo geedo kor ku xusan, xayawaanka waxay ku habboon yihiin dhir kasta oo aan ahayn sumayn. Waxaa ka mid ah geedaha beerta, dushooda yaanyada waa la mamnuucay sababtoo ah sunta ku jirta waxaa ka mid ah - solanine, iyo sidoo kale geedo duurjoog ah - xajmiga, boobka, daroogada iyo kuwa kale.
Waa muhiim! Haddii aadan ogeyn caleemaha aan la siin karin bakaylaha, markaa sunta ayaa lagu ogaan karaa daaqa. Cows ma cunaan celandine iyo dhir kale sun ah.
Maaddaama ay jirto suurtagal ah in lagu sumo shil leh cawska aan la garanayn, waxaa lagama maarmaan ah in la qalabeeyo xirmada guriga bakayle iyada oo la isticmaalayo daroogo loo baahan karo sumowga. Tani waxay kaa caawineysaa wakhtiga si aad u caawiso bakayleka oo aad uga fogaato dhibaatooyinka.
Ma suurtogal in la bakayli celandine: video
waxaa laga yaabaa in aan mawduuca ku jirin, laakiin waxaan shakhsiyan u arkay sida ay awoowe u siisay sunta - wacko celandine, markaa waxaan eegay isaga, oo uu ii sheegay - ma ayan sumoobi doonin, waxay cuni doonaan sida ugu badan ee ay u baahan yihiin iyaga (iyo celandine waa joogto iodiin). Anigu waan u jeedaa, waxaan ku hadlaa sida cawska la yiraahdo, waxaa suurtagal ah in la siiyo cunnooyinka bakaylaha? Oo isagu, isagu wuu qaadaa, oo xiiraa gurguurta ugu horreysa, oo wuxuu leeyahay haddii uu yara yaraayo oo marmarsiiyo ayay macnaheedu tahay caadi, haddii uu soo boodo madaxiisa, macnaheedu waa qashin. Taasi waa krai jir ah oo la koray.